चुनाव अगाबै चुनाव जित्ने मुख्यमन्त्री पोखरेलको दाबी — Imandarmedia.com
चुनाव अगाबै चुनाव जित्ने मुख्यमन्त्री पोखरेलको दाबी
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले लुम्बिनीमा राष्ट्रियसभा सदस्यको उपनिर्वाचनमा एमाले उम्मेदवारले चुनाव जित्ने दाबी गरेका छन् ।
दाङको घोराहीस्थित कर्मचारी मिलन केन्द्र परिसरमा मतदान गरिसकेपछि सञ्चारकर्मीसँग उनले एमाले उम्मेदवारले चुनाव जित्ने दाबी गरेका हन् । अघिल्लो चुनावमा माओवादी केन्द्रबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य बनेका चन्द्रबहादुर खड्का एमाले प्रवेश गरेपछि रिक्त स्थानमा उपनिर्वाचन हुँदै छ ।
चुनावमा एमालेले खड्कालाई नै उम्मेदवार बनाएको छ । काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको विपक्षी गठबन्धनले दृगनारायण पाण्डेलाई साझा उम्मेदवार बनाएको छ । पोखरेलले भने, ‘हाम्रो जित हुन्छ । साँझसम्म नतिजा पर्खनुस् । सबै आइहाल्छ नि ।’
यस्तै घरमा छोरी हुने परिवारलाई नेपाल सरकारले निशुल्क दिने भयो अब यस्तो सुविधा ! काठमाडौ । प्रदेश नं २ सरकारको ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियानअन्तर्गत बीमा गराएका २७ हजार छोरीको घरमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवा जडान गर्ने तयारी थालिएको छ ।
छोरी शिक्षा बीमा गराएका २६ हजार ९५६ छोरीको घरमा निःशुल्क इन्टरनेट जडानको तयारी गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ। प्रदेश सरकारको ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालित छोरी शिक्षा बीमा कार्यक्रममा २ माघ २०७६ यता बीमा गराएका छोरीको घरमा इन्टरनेट जडान गर्न लागिएको अभियानकी संयोजक प्रियङ्का यादवले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै सामाजिक दुरी कायम गरेर वा अनलाइनबाट भएपनि माध्यामिक शिक्षा परीक्षा एसईई सञ्चालन गर्ने तयारी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गरेको छ । यसका लागि वैकल्पिक भनिएको अनलाइन वा सामाजिक दुरी कायम गरेर भएपनि परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने निष्कर्षमा बोर्ड पुगेको छ ।
गएको वर्ष परीक्षा नलिएरै आन्तरिक मूल्यांकनबाट नतिजा निकाल्दा चर्को आलोचना र अस्तव्यस्त भएपछि यसपटक बोर्डले विद्यालयलाई जिम्मा दिएर परीक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको हो ।
यद्यपी यसका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको निर्णय आउन बाँकी छ । कोभिड १९ महामारीका कारण भौतिक उपस्थितीमा बोर्डले तयार पारेका प्रश्नपत्र र कापी बाँडेर परीक्षा गर्ने सम्भावना कम हुँदै गएका बेला विद्यालयबाटै परीक्षा सञ्चालन गरेर मात्रै नतिजा निकाल्ने तयारी अघि बढेको हो ।
यस्तै बाजुराकी बेपत्ता भएकी भनिएकी एक महिला मृत फेला परेकी छिन्। जिल्लाको छेडेदह गाउँपालिका -७ की सरिता रावत आफ्ना श्रीमान सुरेश कठायतको मृत्युको खबर सुनेपछि बेपत्ता भएकी थिइन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेल्धुराका अनुसार कोरोना भाइरस संक्रमित उनका श्रीमानको यही जेठ २ गतेबाट डडेल्धुरा अस्पतालमा उपचार भइरहेको थियो।
यस्तै पछिल्लो २४ घण्टामा थप ४३६९ जनामा कोरोनाभाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ । पीसीआर विधिबाट १० हजार ९८६ गर्दा ३७०२ तथा तथा एन्टिजेन विधिबाट १७८४ जनाको परीक्षण गर्दा ६६७ जनामा काेराेना पुष्टि भएको हो । यही अवधिमा ६२०५ जना निको भएका छन् । कोरोना संक्रमणका कारण १०९ जनाको मृत्यु भएको छ ।
परीक्षणको संख्यामा कमी गरेसँगै पछिल्लो २४ घण्टामा नयाँ संक्रमितको संख्यामा कमी देखिएको हो । नेपालमा अझै पनि संक्रमणको दर उच्च रहेको छ । आज पनि परीक्षण गरेकोमा संक्रमणको दर ३४ प्रतिशतभन्दा माथि देखिएको छ ।
यसअघि दैनिक २० हजारमाथि परीक्षण हुँदै आएकोमा आइतबार यो संख्या १२ हजार ७७० मात्र रहेको छ । शनिबार पनि १४ हजार ७५२ जनामा कोरोना परीक्षण भएको थियो जसमा थप ४४८७ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो । शनिबार थप ६०८० जना निको भएका थिए भने ११६ जनाको मृत्यु भएको थियो ।
भियतनाममा भेटियो कोरोनाको अर्को नयाँ खतरनाक भेरियन्ट
भियतनाममा कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्ट पत्ता लागेको छ । अत्याधिक धेरै संक्रमण फैलाउने यो भेरियन्ट ‘अति घातक’ भएको स्वास्थ्य अधिकारीहरुलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ ।
यो भाइरस भारतमा भेटिएको र बेलायतमा भेटिएको भेरियन्टको म्युटेशनबाट बनेको नयाँ ‘हाइब्रिड’ भएको जनाइएको छ । अधिकारीहरुका अनुसार यो भेरियन्ट हावाको माध्यमबाट पनि तीव्र गतिमा फैलिने छ । भियतनामका स्वास्थ्य मन्त्री गुयन थान लङ्गले शनिबार नयाँ म्युटेशन निकै खतरनाक रहेको बताएका छन् ।
भियतनामका स्वास्थ्यमन्त्रीले के भने?
रोयटर्स समाचार संस्थाले स्वास्थ्यमन्त्री गुयनले सरकारी बैठकमा भनेको कुरालाई लेखेको छ: “भियतनामले अहिले नै रहेका सुरुमा भारत र यूकेमा देखिएका भेरिअन्टको मिश्रित गुणहरू सहितको नयाँ कोभिड-१९ को भेरिअन्ट देखेको छ।”
उनले नयाँ ठिमाहा भेरिअन्ट यसअघिका संस्करणमा देखा परेकाभन्दा निकै सङ्क्रामक रहेको र त्यो खासगरी हावामार्फत फैलने बताए।अनलाइन पत्रिका भीएनएक्सप्रेसका अनुसार उनले हालै देखा परेका बिरामीहरूमा परीक्षणहरू गर्दा उक्त भेरिअन्ट देखिएको स्वास्थ्यमन्त्री गुयनले बताएका थिए। उनले भाइरसको यस भेरिअन्टको ‘वंशाणुगत सङ्केत’ छिट्टै उपलब्ध गराइने बताएका छन्।
गत वर्षको अक्टोबरमा पहिलो पटक भारतमा देखा परेको बी.१.६१७.२ भेरिअन्ट यूके/केन्ट भेरिअन्ट (बी.१.१.७) भन्दा निकै सङ्क्रामक रहेको विज्ञहरूले बताएका छन्।
अध्ययनहरूले फाइजर र आस्ट्राजेनेकाजस्ता खोपहरू दुई खेप लगाउँदा त्यसको असर भारतीय भेरिअन्टविरुद्ध निकै प्रभावकारी पाइएको बताएका छन्। खोपको एउटा मात्र मात्राबाट हुने सुरक्षा भने कम पाइएको छ। निकै धेरै मानिसहरूमा उत्परिवर्तन भएका भाइरसहरूले निकै गम्भीर बिमारी निम्त्याउने कुराको कुनै प्रमाण भेटिएको छैन।
सुरुको भाइरसबाटै ज्येष्ठ उमेर समूहका वा जोखिमपूर्ण स्वास्थ्य समस्या भएकाहरूमै जोखिम उच्च देखिन्छ। तर थप सङ्क्रामक र उत्तिकै खतरनाक हुने कुनै भाइरस खोप नलगाएका धेरै मानिसहरूमा फैलँदा त्यसले थप मृत्युहरू निम्त्याउँछ।
भियतनामको अवस्था के छ?
पछिल्ला सातामा भियतनाममा कोभिड-१९ का घटनामा उच्च वृद्धि देखा परेको छ। महामारी सुरु भएयता उक्त दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकमा ६,७०० भन्दा बढी कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएका छन्। तीमध्ये आधाभन्दा धेरै यसै वर्षको एप्रिल महिनापछि देखिएका हुन्। जोन्स हप्किन्स युनिभर्सिटीको विवरण अनुसार अहिलेसम्म त्यहाँ ४७ वटा कोभिड जोडिएका मृत्युका घटना पुष्टि भएका छन्।